Sọpụrụ 6X gafere ule ntachi obi siri ike | Gam akporosis
Alfonso nke mkpụrụ osisi | | Huawei, Noticias
Izu ole na ole gara aga ndị Ekwentị ọhụrụ dị n'etiti etiti. Anyị na-ekwu maka Honor 6X, ọnụ nke nwere ọnụahịa adịchaghị na ọnụahịa mara mma n'ezie: euro 249.
Ma mmata Youtuber JerryRigIhe niile , ama ama na-emekpa ekwentị niile edebere n'ihu ya enyoghi anya maka oge mee ka Sọpụrụ 6X gafere maka tebụl ọrụ ya dị oke njọ. Nsonazụ ahụ? Ekwentị ọzọ na ndepụta ndepụta ya nke ọnụ na-ata ahụhụ.
The Honor 6X na-agafe ule nyocha
Ma ọ bụ ihe ọma, Jerry nwere obi ụtọ ịgba ọtụtụ ule nke ọ na-etinye ike nke ekwentị na njedebe, na onye ohuru ohuru nke Honor nke Huawei agagh adi obere.
Ihe mbụ o mere bụ wepu nchedo ihuenyo nke na-abịa tupu arụnyere na ekwentị ma gbalịa ịkụcha ọnụ. Ihe ọ rụpụtara bụ ọdachi. Enweghi onye nche ahụ obere ihuenyo ahụ mebiri emebi. Ihe nkuzi nke mbụ: zụta ezigbo ihe nchebe ihuenyo maka Honor 6X gị.
Nzọụkwụ ọzọ bụ lee oghere mgbochi igwefoto na, ọ bụ ezie na ụkpụrụ a na-echekwa ya site na otu iko ahụ na-ekpuchi ihuenyo ahụ, na nke a ọ naghị adị mfe mmebi, na-agafe ule agụba.
Otu ihe a anaghị eme na akụkụ nke elu na nke ala nke ekwentị ahụ, nke e ji plastik mee iji dobe antenna ndị ahụ ma na-ese ya ka ha ghara ịlụ ọgụ na ndị ọzọ. Ma ọ dịghị ihe dịka JerryRigEgwuregwu niile maka akụkụ ero ndị a.
Ikwu ya Azụ azụ na kaadị SIM nke Honor 6X bụ ọla nke na-eme ya ọtụtụ ihe na-eguzogide ọgwụ, ọ bụ ezie na ọ bụ nnọọ mfe ka ha ọkọ ọkọ. Ihe nkịtị na aka nke ọzọ
Mgbe emebisịrị ekwentị ahụ ntakịrị, JerryRigEverything kpebiri ime nyocha acid: mbugharị nke Honor 6X. N'ebe a, ekwentị dị obere karịa ka a tụrụ anya ya wee mebie. Ekwentị na, maka Euro 249, Gaghị atụ anya na ọ ga-enwe ngwongwo titanium, agbanyeghị na m na-echetara gị ọzọ mkpa ọ dị ịzụrụ ihe ngebichi. Dọrọ gị aka ná ntị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Honor 6X a na-agabiga ule ntachi obi siri ike